Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Waxaa lagu abaalmariyay inuu noqdo Geesi Dalxiiskii ugu horreeyay ee ka socda Azerbaijan
Awards • Wararka Azerbaijan • Jebinta Wararka Caalamka • News • Dadka • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Wtn
Mudane Efsun Ahmadov maahan oo kaliya Maamulaha Kooxda Next ee Baku, laakiin sidoo kale waa geesigii ugu horreeyay ee dalxiiska ee lagu casuumay inuu ku biiro hoolka caalamiga ah ee xafladaha geesiyada dalxiiska.
Mr.Efsun Ahmadov waa agaasimaha guud Kooxda Xiga ee LLC ee Azerbaijan, waxaana lagu abaalmariyay inay gasho Hoolka Dalxiiska ee Internationa.
Mudane Ahmadov waa geesigii ugu horeeyey ee dalxiiska ka yimid Azerbaijan.
Wuxuu muujiyey hoggaamin intii lagu jiray xiisadda COVID-19 ee bixinta adeegyo mutadawacnimo ah si loo caawiyo warshadaha caafimaadka.
Dalxiiska Hoolka Geesiyaasha waa hindise Shabakadda Dalxiiska Adduunka oo xubno ka ah 128 dal.
Cudurka faafa awgiis, dunidu waxay la kulantay dhibaato dalxiis muddo ku dhow laba sano. Waxay sidoo kale ku xisaabtamaysaa Azerbaijan.
Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha dalxiiska ee jecel shaqooyinkooda ayaa aad ugu dadaala sidii ay u ilaalin lahaayeen una horumarin lahaayeen warshadahooda. Dadkaas waxaa ka mid ah Mr. Efsun Ahmadov.
Intii lagu jiray masiibada, wuxuu fuliyay shaqooyinkan oo kale sida abaabulka gaadiidka si dhakhaatiirta loo geeyo shaqada.
Wuxuu u abaabulay adeeg mutadawacnimo ah gaarsiinta dawooyinka iyo dawooyinka kale ee muhiimka u ah bukaannada qaba Covid; bixinta taageero macluumaad la xiriira masiibada.
Mudane Ahmadov wuxuu ka soo kabanayay COVID-19 laftiisa markii uu la hadlay eTurboNews